Tontolo_iainana · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Jolay, 2013
Amerika Latina 28 Jolay 2013
Nanokatra varavarana voalohany ho an'ny fambolena fary manodidina ny faritry ny alan'i Amazona sy ny faritra mando manodidina ary ny faritra rakotra bozaka avo i Brezila, ka nahatonga ny tebitebin'ireo mpiaro ny tontolo iainana.
An'arivony Ireo Nanao Diabe Tao Shina Nanohitra Ilay Tetikasa Fametrahana Fitaovana Fandoroana Fako Ao Guangzhou
An'arivony ireo mponina avy ao amin'ny tanàna iray ao Guangzhou, faritany iray ao Atsimon'i Shina, no nidina an-dalambe hanao hetsi-panoherana nohon'ny tahotra ny mety handotoana ny tontolo iainana.
Hetsi-panoherana Nampandamoaka Tetikasa Fananganana Foibe Nokleary Tao Atsimon'i Shina
Taorian'ny telo andro nisesy nanaovana hetsi-panoherana, dia hita fa nandao ny tetikasany hanangana foibe nokleary ny governemanta monisipalin'i Heshan ao an-drenivohitr'i Jiangmen. Manahy izy ireo fa mety hafindra any an-toeran-kafa fotsiny ilay tetikasa, any amin'ny farihin'i Pear River Delta Atsimon'i Shina, izay tanàna isan'ny be mponina indrindra.
Riau, Indonezia : Zavon'ny ‘Ground Zero’ Ao Azia Atsimo
Ilay setroka mahafaty nandrakotra an'i Singapore sy ireo faritra sasantsasany tao Malayzia hita tamin'ity taona ity dia vokatry ny doro ala tao Riau, izay ao amin'ny faritra Andrefan'i Indonezia. Mazava ho azy fa nisarika ny sain'ireo filazam-baovao goavana rehetra izany, kanefa, vitsy ny tatitra mahakasika ny manjo ireo mponina ao Riau izay tena nijaly tokoa ary mbola mijaly ihany hatramin'izao noho ny vokatra naterak'ilay setroka sy ireo doro ala maro.
Mponin'i Jiangmen ao Shina Manohitra Tobim-Panodinana Uranium
Azia Atsinanana 13 Jolay 2013
Mponina an-jatony maro ao Jiangmen, tanàna iray manakaiky an'i Guangzhou any atsimon'i Shina, no nidina an-dalambe hanohitra ny fanorenana ny tobim-panodinana uranium tamin'ny 12 Jolay 2013.
Azia Atsimo 11 Jolay 2013
Sempotry Ny Zavona i Singapore Sy Malezia
Azia Atsinanana 07 Jolay 2013
Nahatakatra haavony mampidi-doza ny kalitaon'ny rivotra any Singapore sy Malezia taorian'ny nandrakofan'ny setroky ny doro ala ny mpiray vodirindrina aminy, Indonezia. Io no zavona ratsy indrindra hita tany Azia Atsimo tanatin'ny taona vitsy. Nampiato ny fianarana tany amin'ireo toerana tratr'izany i Malezia raha nanome sosokevitra ny vahoakany hiomana amin'ny fihitaran'io zavona io. Efa nanao fialantsiny ofisialy i Indonezia manoloana io zavona io.